ခင်မင်ရပါသော အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ ခင်ဗျာ
*The U.S. Department of State will announce winners of the 2012 Diversity
Visa (DV) Program starting on May 1, 2011. * The *only* means by which
selectees may find out if they are selected for DV 2012 will be via the
Department of State’s Electronic DV Entrant Status Check Web Site:
လာမဲ့ *မေလ (၁) ရက် ၂၀၁၁* နေ့မှာ အမေရိကန် DV ပေါက်မဲဆုရှင်များကို ကြေငြာပါမယ်။ လျှောက်လွှာရှင်များ မိမိတို့ ၂၀၁၂ DV program မှာ ရွေးချယ် ခံရ မခံရ ကို www.dvlottery.state.gov ထဲမှာ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
Please be sure to have the entrant's *Confirmation Number,* *Last Name/Family Name, *and *Year of Birth *in order to check the entrant status online.
လျှောက်လွှာတင်သူက မိမိလျှောက်လွှာ မှာရေးသားဖြည့်သွင်းခဲ့တဲ့ Confirmation Number, မိမိအမည် last name/family name, မွေးသက္ကရာဇ် (လျှောက်လွှာမှာ ရေးသား ထည့်သွင်း ထားတဲ့အတိုင်းအတိအကျ) ဖေါ်ပြလျက် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
If you are selected asaDV winner you must respond by following the instructions on the Entrant Status Check Web Site. After responding you will receive follow-up instructions from the State Department about processing your case to completion. U.S. Embassy Rangoon will not be providing these follow-up instructions.
ပေါက်မဲရှင် (DV Winner) အဖြစ် အရွေးခံရကြောင်း သိရလျှင် Entrant Status Check Web Site မှာပေးထားတဲ့ ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာလျက် အွန်လိုင်းမှပင် အကြောင်းပြန်ကြားပါ။ အကြောင်းပြန်ကြားပီးရင် တော့ အမေရိကန် State Department က အပြီးသပ်ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမဲ့ ကိစ္စ ရပ်တွေအတွက် ညွှန်ကြားချက်များရပါလိမ့်မယ်။ ရန်ကုန် အမေရိကန်သံရုံးက ဒီ အပြီးသပ်ဆောင်ရွက်ရမဲ့ ညွှန်ကြားချက်များ (follow-up instructions) ကို ထုတ်မပေးပါဘူးတဲ့။
Currently, many DV applicants in Burma and around the world are receiving fraudulent emails notifying them that they have won the DV lottery.
ခုခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် တကမ္ဘာလုံး က DV လျှောက်လွှာရှင်တွေ ဟာ မမှန်မကန် အီးမေးလ်တွေ လက်ခံရရှိနေကြတယ်။ အဲဒီ အီးမေးလ် တွေထဲမှာ လိပ်စာရှင်တွေဟာ DV ပေါက်ပြီလို့ လိမ်ညာထားကြပါတယ်။
*Please note that those selected in the random drawing will NOT be notified of their selection by email or regular mail.* *Also, entry in the DV program is free! Selectees are not required to send money to find out if they have been selected.
*သတိပြုရမှာက ရွေးချယ်မှုဟာ random စံနစ် ဖြစ်သလို ဘယ်သူ့ ကိုမှ ရွေးချယ်ခံရကြောင်းကို e-mail ဖြင့် သော်လည်းကောင်း ပုံမှန်စာတိုက်မှ သော်လည်းကောင်း လုံးဝ (လုံးဝ) ပေးပို့ခြင်း မပြုပါ။ DV program ဟာအခမဲ့သာ ဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောလိုပါတယ်။ ရွေးချယ်ခံရသူများ ဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ငွေပေးပို့ စရာမလိုပါ။*
When the State Department announces DV winners on May 1, 2011, it will not chargeafee for that information. We caution all not to send money to anyone asking for it from an unsolicited email.
DV ပေါက်မဲများကို State Department က မေလ ၁ ရက်နေ့ ၂၀၁၁ မှာ ကြေငြာတဲ့အခါ မည်သည့်အဖိုးအခမှ မယူပါ။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူ့ဆီကိုမှ၊ ဘယ်လိုတာဝန်ယူလုပ်ပေးပါ့မယ်လို့ ပြောတဲ e-mail ဆီကိုမှ *ငွေပို့မပေးဖို*့ ကျနော်များ သတိပေးလိုပါတယ်။
For more information about the DV notification process, please visit: http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1322.html ဒီထက်မက ပိုသိချင်ပါသေးရင်တော့ ဖေါ်ပြပါ လိပ်စာမှာ ရနိုင်ပါတယ်။ http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1322.html
Please pass the word to your friends and colleagues! Those with further questions should feel free to visit the Embassy website or the Consular Section’s Facebook page or email us at ConsularRangoon@state.gov.
Embassy Website: http://burma.usembassy.gov/visas.html
Consular Section Facebook Page:
သင့်မိတ်ဆွေများ နဲ့လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များကို လက်ဆင့်ကမ်း သတင်းပေးကြပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ထပ်မံသိလိုတာတွေရှိသေးရင် အောက်မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးရဲ့ ကောင်စစ် ဌာန (Consular section) ရဲ့ website သို့မဟုတ် facebook စာမျက်နှာ ကို ၀င်ရောက်မေးမြန်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လဲ ကောင်စစ်ဌာန ကို အောက်ပါ e-mail ဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း